कर्निंग, एक अवधारणा जुन ग्राफिक डिजाइनरले जानेका हुन | क्रिएटिव अनलाइन
कर्निंग, ग्राफिक डिजाइनरले थाहा पाउनु पर्ने अवधारणा
यो तपाइँलाई परिचित लाग्दछ, तर तपाइँलाई के थाहा छैन। वा तपाईंले यो कतै देख्नुभयो, तर यसको अर्थ वर्णन गर्न सक्नुहुन्न। वा तपाइँलाई याद छैन, र तपाइँले यो कक्षामा धेरै दिन अघि (वा केही वर्ष अघि) दिनुभयो। आराम गर्नुहोस्: तपाईं केवल ग्राफिक डिजाइनर हुनुहुन्न जुन यो के हो राम्ररी जान्दैन कर्निंग.
यो पोष्टमा हामी तपाईंको सम्झना ताजा गर्दछौं यो के हो भन्नेको आधारभूत विवरणको साथ, यो के हो र तपाईं यसलाई कसरी परिमार्जन गर्न सक्नुहुन्छ। म आशा गर्दछु कि, यो पोष्ट पढे पछि तपाईले प्राप्त गर्नुभयो राम्रो टेक्स्ट तपाइँको पाठ खाता कर्निंगमा लिदै।
1 कर्निंग के हो?
2 अप्टिकल कर्निंग र मेट्रिक कर्निंग बीचको भिन्नता
कर्निंग के हो?
कर्निंग शब्द सर्तलाई सन्दर्भ गर्न प्रयोग गरिन्छ अवस्थित ठाउँ अक्षर जोडी बीच। तपाईं सायद सोच्दै हुनुहुन्छ कि यदि तपाईंले यसबारे पहिल्यै सुन्नुभएको छैन भने, यो तार्किक हुनेछ कि त्यहाँ कुनै शब्दका सबै अक्षरहरू बिच समान ठाउँ हुन्छ। यदि तपाई टाईपोग्राफीमा न्यूनतम ध्यान दिनुहुन्छ भने, तपाईले बुझ्नुहुनेछ कि यो विश्वास कत्तिको गलत छ: किनकि चिठीको आकारले हामी वरपरको अन्तरिक्ष छ भन्ने धारणा निर्धारण गर्दछ। W र O भन्दा M र N को रूपमा हुन मिल्दैन। तलको छविमा तपाईले देख्न सक्नुहुन्छ कि दुई जोडी अक्षरहरूको बीचमा उहि स्पेसको साथ डब्ल्यू र O को बीचमा हामी लाग्छौं। अलि बढी हावा पाउन।
राम्रो फन्टहरू, ती डिजाइन गरिएका हुन् जुन सामान्यतया आवाश्यक हुन्छ धेरै सानो समायोजन कर्निंगको। जे होस्, यो खराब हो कि डिजाइनर द्वारा अधिक मैन्युअल कर्निंग हेरफेर आवश्यक पर्दछ। यहाँ म एउटा बुँदा बनाउन र सल्लाह दिन चाहान्छु: धेरै जसो नि: शुल्क फन्टहरू (आँखा, सबै होईन) ले हामीलाई जोडी अक्षरहरूको बिच ठाउँको समस्याको बारेमा युद्ध दिन्छ।
यदि तपाईंले InDesign ह्यान्डल गर्नुभयो भने, तपाईंले कहिलेकाँही यो आईकनको बारेमा सोच्नु भएन होला जुन तपाईंले कुनै अवसरमा हेर्नुपर्नेछ। हो, यो कर्निंगको सन्दर्भमा आईकन हो।
यसलाई परिमार्जन गर्न हामीसँग0मान छ (स्पेसिing जस्तो छ त्यस्तै छोड्नुहोस्) वा हामी धेरै नकारात्मक र सकारात्मक मानहरू बीच छनौट गर्न सक्छौं जुन5देखि from सम्ममा। नकारात्मक मान, हामी अक्षरहरू बीचको दूरी कम गर्नेछौं; संग सकारात्मक मानहरू, हामी यसलाई बढाउनेछौं।
अप्टिकल कर्निंग र मेट्रिक कर्निंग बीचको भिन्नता
र अन्य दुई संख्यात्मक विकल्पहरूको बारेमा के भन्न सकिन्छ? यो बिचमा के भिन्नता हो ठ्याक्कै थाहा छैन अप्टिकल कर्निंग र मेट्रिक कर्निंग: तिनीहरू के हुन् र उनीहरू किन फरक स्पेसि def परिभाषित गर्छन्? पहिलो स्वचालित रूपमा हामीले प्रयोग गरिरहनु भएको डिजाईन प्रोग्रामद्वारा कार्यान्वयन गरिन्छ (जस्तै InDesign)। तपाईलाई सुविधाजनक लाग्ने ठाउँको हिसाब गर्नुहोस् र हाम्रो लागि यसलाई लागू गर्नुहोस्। केही डिजाइनरहरू यो कागजातको हेडलाइटहरू ट्युन गर्न यो विकल्पको प्रयोग गर्छन्; जहाँसम्म, पाठ चलाउनका लागि, उनीहरूले रुचाउँछन् मेट्रिक कर्निंग। यो टाईपोग्राफरले आफ्नो टाइपफेस डिजाईन गर्दा सोच्ने ठाउँ हो। सानो आकारमा, यो सामान्यतया राम्रोसँग सन्तुलित हुन्छ।
कहिले, तब हामीले म्यानुअल कर्निंग प्रयोग गर्नु पर्छ? ठिक छ, जब माथिको कुनै पनि विकल्पले हामीलाई मनाउँदैन (जुन हुन सक्छ)।
र तपाइँ, के तपाईंलाई थाहा थियो यो के थियो? के तपाईले पहिले कुनै पाठको कर्निंग समायोजित गर्नुभयो? तपाईको अनुभव के हो? याद राख्नुहोस् कि तपाई आफ्नो टिप्पणीहरू योगदान गर्न यो पोस्टको अन्तमा टिप्पणी क्षेत्र प्रयोग गर्न सक्नुहुनेछ।
थप जानकारी - तपाईंको प्रयोग र रमाईलोको लागि १० फन्टहरू
लेखको पूर्ण मार्ग: अनलाइन रचनात्मक » सामान्य » ग्राफिक डिजाइन » कर्निंग, ग्राफिक डिजाइनरले थाहा पाउनु पर्ने अवधारणा
पोष्टका लागि धन्यबाद। म 'कर्निंग' शब्दको अर्थ बारे अनजान थिए। अभिवादन र बधाई हो।
Zulemo लाई जवाफ दिनुहोस्
मलाई खुशी छ कि तपाईले यो मनपराउनु भयो, जुलेमो। अभिवादन र पढ्नका लागि धन्यबाद (र टिप्पणी)।
जूलियो Hurtado भन्यो
जुलिओ हूर्ताडोलाई जवाफ दिनुहोस्
धेरै राम्रो लेख, म यो सँधै लागू गर्छु तर अवधारणा थाहा छैन।
बेटलाई जवाफ दिनुहोस्
जॉर्ज युफ्रा भन्यो
कर्निंगको बारेमा डिडक्टिक एक्सप्लिकेसनका लागि धन्यबाद। सामान्यतया म यसलाई सहजै प्रयोग गर्दछु, तर अब मसँग सही सैद्धांतिक आधार जर्ज छ, साल्टा, अर्जेन्टिनाबाट।
जॉर्ज युफ्रालाई जवाफ दिनुहोस्
PhpMyAdmin का साथ ठूला डाटाबेसहरू आयात गर्दै
डेडलाइनहरू: ग्राफिक डिजाइनरको सपना